AMERICAN ENGLISH COONHOUND INFORMATION EY MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Buck the American English Coonhound (Redtick Coonhound) da'da 6 sano
Liistada eeyaha Ingiriisiga ah ee Coonhound Mix brewed
Koodhka Ingiriisiga Coonhound waa mid gaaban oo adag. Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah: buluug iyo caddaan la calaamadeeyay, midab casaan iyo caddaan leh, oo midabkeedu yahay shiil, casaan iyo caddaan, iyo caddaan iyo madow. Casaan ama madow xad dhaaf ah ayaa cilad ku ah giraanta bandhiga. Jiridiisu waxay u egtahay bawl hound. Dabo waa dherer dhexdhexaad ah oo sare. Wanaagsan, feejignaan leh, kalsooni leh oo la dhaqan leh aadanaha iyo eeyaha.
Ingiriisiga Coonhounds waa mid firfircoon, caqli badan oo firfircoon. Iyagoo jecel oo u hanqal taagaya inay ka farxiyaan milkiilayaashooda, dareenkooda weyn waxay ka dhigaan ugaadhsato heer sare ah. Noocani waa mid aad u dhakhso badan, kulul oo daba socda nooca coonhound. Aad ugu heellan qoyskeeda, waxay ka dhigtaa eey wehel wanaagsan ah. Waxay sifiican ugu nooshahay gudaha gudaha waxayna u ciyaartaa ilaaliye wanaagsan qoyskiisa iyo gurigiisa. Badanaa waxay ku fiican yihiin carruurta tixgelinta weyn leh, laakiin sidoo kale si fiican ayey ula shaqeyn karaan kuwa da'da yar. Iyadoo aan habboonayn bini'aadam ilaa hogaaminta canine iyo wada xiriirka qaarkood waxay noqon karaan xoogaa eey-dagaal iyo / ama horumar arrimaha dhaqanka . Waxay u baahan yihiin milkiileyaal kuwaas oo ah adag, kalsooni leh oo iswaafaqsan leh hawada maamulka . Bulsho Tani waxay si fiican u dhalataa, iyadoo la doorbidayo iyadoo weli da 'yar si looga hortago inay ku sii jiraan shisheeyaha. Ha u oggolaan in caruurtani ay ka baxaan xarigga aag aan ammaan ahayn, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay ka baxaan ka dib caraf xiiso leh. Waxay leeyihiin dareen adag oo xayawaanka geedaha ah. Iyadoo aan ku filneyn jimicsi maskaxeed iyo mid jireed waxay noqon doonaan kuwo la sarreeyo.
Dhererka: 21 - 27 inji (53 - 69 cm)
Miisaanka: 40 -65 rodol (18 - 30 kg)
Eeyahaas laguma talinayo nolosha guriga. Waxay ku firfircoon yihiin gudaha waxayna ku fiicnaadaan acreage.
Ingiriis Coonhounds wuxuu ubaahanyahay orod ballaaran maalin kasta si uu u faraxsanaado. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, dheer, kacsan soco ama orod meesha eygu ka samaysan yahay ciribta dhinac ama gadaashiisa qofka haysta hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa, hogaamiyaha ayaa ku hogaaminaya wadada. Waxay noqon karaan kuwo heer sare ah iyo / ama wax duminaya haddii ay ka maqan yihiin jimicsi iyo / ama qaabdhismeed . Way duuli karaan kadib wixii caraf ah oo xiisa leh, markaa haka qaadin Coonhound-ka Ingiriisiga xadhigiisa illaa aad ku sugantahay meel aamin ah mooyee.
Koodhka gaaban, adag waa sahlan tahay in la daryeelo. Shanlo oo ku caday burush adag, iyo shaambo marka loo baahdo oo keliya. Noocani waa celcelis daadiya.
Waxaa la yiri taariikhda Coonhound-ka Ingriiska waa taariikhda dhammaan coonhound. Marka laga reebo Plott Hound, inta badan coonhound dib ayaa loo heli karaa Ingiriisi Foxhound . Sannadkii 1905-kii ayaa Coonhound-kii Ingiriisiga ahaa waxa markii ugu horraysay diiwaangeliyey UKC iyada oo la adeegsanayo magaca English Fox & Coonhound. Waqtigaas ka dib waxaa loo adeegsan jiray ugaarsiga dawacooyinka si ka badan sida ay maanta yihiin. Magaca ayaa ka tarjumayay isku ekaanta ay noocyadu ku lahaayeen kan American Foxhound iyo Ingiriis dawachound . In kasta oo Redbone iyo Black iyo Tan la siiyay xaalad isir ahaaneed oo gaar ah, dhammaan coonhounds kale ee geedaha waxaa loo yaqaanay Ingiriis wixii ka dambeeyay bilowgii qarniga. Kuwaas waxaa ka mid ahaa labadaba Geed Walker Coonhound iyo Bluetick Coonhound . Waxaa loo tixgeliyey inay isku mid yihiin. Waxay ahayd kala duwanaanta midabka taas oo kala soocday. Eeyda aadka loo calaamadeeyay ayaa ka kala go'ay Ingriiska, Bluetick Coonhound waxaa loo aqoonsaday inuu yahay nooc gaar ah sanadkii 1945. Sanadkii 1946 digaagado saddax midab leh ayaa loo kala saaray nooca loo yaqaan Treeing Walker Coonhounds. In kasta oo eeyaha gaduudan ay badan yihiin, ilaa maantadan la joogo waxaa wali jira tuugagyo Ingiriis ah oo saddax midab leh oo buluug ah. The English Coonhound waxaa loo soo saaray inuu la qabsado cimilada adag ee Mareykanka iyo dhulkaba. Ingiriis magaciisu yahay 'Lafaha,' oo uu leeyahay Colonel Leon Robinson, ayaa ku guuleystay mid ka mid ah horyaaladii Coonhound ee Qaranka. Taranka wali waxaa isticmaala ugaarsadayaasha wax ku oolka ah iyo milkiileyaasha hound ee tartanka ku leh Mareykanka oo dhan
UEBFA = United English Breeders iyo Fanciers Association
Flora the Redtick Coonhound oo seddex sano jir ah oo ku fadhida jaranjarada.
Lydia oo jirta 1 sano - iyadu waa waji midab buluug leh lagu calaamadeeyay oo ah Coonhound-ka Ingiriiska.
Cody the Redtick Coonhound (Ingiriis Coonhound) qiyaastii 1 sano jir - milkiilihiisa ayaa leh, Wuxuu jecel yahay inuu ku nasto oo ku seexdo sariirta iyo sariirta adiga. Sida aad ku aragto sawirkan waxaad moodaa inuu u maleynayo inuu yahay bisad (taasi waa sida aan u maleyneyno ugu yaraan) wuxuu jecel yahay inuu jiifo dhabarka sariirteenna oo uu daaqadda ka daawado. Ma hubno sida uu ugaarsiga u sameyn doono, laakiin waxaan ogaan doonnaa sannadkan.
Dixie waa hal sano jir Ingiriis Coonhound - milkiilaheeda ayaa leh, 'Iyadu waa eeyga ugu macaan, dadka ugu jecel dadka aan abid haysto.'
Purdie oo ah 2 ½ sano jir
Tani waxay ahayd Hannah markii ay eey la ahayd saaxiibkeed kitty.
Lillie iyo Mollie, Redtick English Coonhounds oo 6 bilood jira— 'Waxaan soo qaaday sawirradan subax subax markii ay hurdada ku seexanayeen sariirta. Weligeen maanaan haysan 2 eeyo jacayl badan. Waxay walaalo yihiin oo aad isu jecel yihiin isla markaana wada ciyaara.
Lillie iyo Mollie, Redtick Ingiriis Coonhounds markay jiraan 6 bilood
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah Coonhound Ingiriis Mareykan ah
Sawirada American English Coonhound 1
hound basset muqisho isku darka collie soohdinta
sawirada eyga buur bernese iyo sawiro
god muqisho isku darka iyo sahashan dibi
basset hound shaybaarka isku dhafka ah